Z - Mettashin ShwePyiThar - U Zawana - အရှင်ဇဝန - မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ပါရမီထိုက...
ပါရမီထိုက်သောဒါန နှင့် ပါရမီမထိုက်သောဒါန တရားတော်
Tags: မေတ္တာရှင်အရှင်ဇ၀န(ရွေပြည်သာ) - ashinzawana ashin_zawana shwepyithar myittarshin mettashin uzawana u_zawana Z - Mettashin ShwePyiThar - U Zawana - အရှင်ဇဝန - မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] မယ်တော်ဂု...
Tags: မေတ္တာရှင်အရှင်ဇ၀န(ရွေပြည်သာ) - ashinzawana ashin_zawana shwepyithar myittarshin mettashin uzawana u_zawana Z - Mettashin ShwePyiThar - U Zawana - အရှင်ဇဝန - မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ရဟန္တာကို...
ရဟန္တာကို မကြည်ညိုတတ်သူများ တရားတော်
Tags: မေတ္တာရှင်အရှင်ဇ၀န(ရွေပြည်သာ) - ashinzawana ashin_zawana shwepyithar myittarshin mettashin uzawana u_zawana Z - Mettashin ShwePyiThar - U Zawana - အရှင်ဇဝန - မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ကိုးဆယ့်တ...
ကိုးဆယ့်တစ်ကမ္ဘာတိုင် ကျတဲ့မျက်ရည် တရားတော်
Tags: မေတ္တာရှင်အရှင်ဇ၀န(ရွေပြည်သာ) - ashinzawana ashin_zawana shwepyithar myittarshin mettashin uzawana u_zawana Z - Mettashin ShwePyiThar - U Zawana - အရှင်ဇဝန - မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] မေတ္တာဖြင်...
မေတ္တာဖြင့် စီးပွါးရှာခြင်း တရားတော်
Tags: မေတ္တာရှင်အရှင်ဇ၀န(ရွေပြည်သာ) - ashinzawana ashin_zawana shwepyithar myittarshin mettashin uzawana u_zawana Z - Mettashin ShwePyiThar - U Zawana - အရှင်ဇဝန - မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အမြင်မှန်...
အမြင်မှန် (၅)မျိုး တရားတော်
Tags: မေတ္တာရှင်အရှင်ဇ၀န(ရွေပြည်သာ) - ashinzawana ashin_zawana shwepyithar myittarshin mettashin uzawana u_zawana Z - Mettashin ShwePyiThar - U Zawana - အရှင်ဇဝန - မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အပါယ်သြဂဆ...
Tags: မေတ္တာရှင်အရှင်ဇ၀န(ရွေပြည်သာ) - ashinzawana ashin_zawana shwepyithar myittarshin mettashin uzawana u_zawana Z - Mettashin ShwePyiThar - U Zawana - အရှင်ဇဝန - မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] မေတ္တာအစွမ...
မေတ္တာအစွမ်း အံမခန်း တရားတော်
Tags: မေတ္တာရှင်အရှင်ဇ၀န(ရွေပြည်သာ) - ashinzawana ashin_zawana shwepyithar myittarshin mettashin uzawana u_zawana T - Thi La Ganda - သီလကဏ္ဍ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ငါးပါးသီလ...
Tags: ဆရာတော်ဦးသာသန ၏ ငါးပါးသီလပေး , ငါးပါးသီလ , သီလ , sayardaw u tharthana , sayardaw utharthana , usarsana , u sarsana , ThaLa , thi la ,5par thi la , 5parthila N - Sidagu Sayardaw - Ashin Nyanissara - Nyarnitthara - သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဉာဏိဿရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဉာဏ်မျက်စ...
Tags: အရှင်ဉာဏိဿရ သီတဂူ - Sitagu sidagu thitagu thidagu ashin_nyarnitthara ashinnyarnitthara ashin_nyanissara Pages: 1234567 8910 11 12 13 of 67